दुर्गा प्रसाईंलाई किन सजाय भएन ? – Everest Dainik – News from Nepal
काठमाडौं, साउन १० । कसैको गालीबेइज्जती गरे के हुन्छ ? कानुन भन्छ, ‘मुद्दा चल्छ र सजाय हुन्छ ।’ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यसो गरे उसको पद नै जान्छ । जस्तो कि भर्खरै कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ राजीनामा दिन बाध्य भए । उनले एउटा समूहका चेलीहरूलाई औंल्याएर दिएको मन्तव्य रातारात सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो ।
यस्तो गर्नेलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। ‘तर यसका लागि पीडित वा पीडितको परिवारले उजुरी दिनुपर्छ,’ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐनको व्यवस्थाले भने सरकार आफैंले मुद्दा लगाएर कसुर प्रमाणित भए २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्छ।’ कान्तिपुरमा समाचार छ ।
ट्याग्स: Durga parsai, दुर्गा प्रसाईं
अन्नपूर्णमा आधार शिविरमा हराएका पर्यटक खोज्दै सेना